काठमाडौं । करेण्ट तयारी चाउचाउ, यशोदा फुड्स प्रालि अन्तर्गतको ब्राण्डले करेण्ट मनोरञ्जन मेलाको आयोजना गर्ने भएको छ । मेला सुगम पेट्रोल पम्प बिर्तामोड झापामा पौष २९ गते दिउँसो १२ बजेदेखि सञ्चालन हुने आ...
काठमाडौं । अहिलेका निकै चर्चित तथा व्यस्त गायक शिव परियारको नयाँ गीत ‘आँशुको अर्थ’को भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । सयौ हिट गीत दिएर लाखौ दर्शक तथा स्रोताको मन जित्न सफल गायक शिव परियारको आवाजमा रहेको न...
सुजन लामाको गीत “उभो उभो सैलुङ मा” सार्वजनिक
काठमाडौ । गायक सुजन लामाको “उभो उभो लाग्यो सैलुङ्मा ”बोलको गीत बजारमा आएको छ । तामाङ सेलोमा रहेको लामाको गीतमा आफ्नी मायालुलाइ फकाउने प्रयास गरिएको छ । सेलो बजारमा पुर्याउँदा आफु निकै खुशी रहेको बताउ...
पूर्वपत्निले ऋतिकलाई जन्मदिनको शुभकामन दिँदै भनिन्,‘तपाई मेरो जीवनको प्रकाश हो’
बलिउडका ह्याण्डसम हङ्क ऋतिक रोशन आज ४४ औं जन्मदिन मनाउँदै छन्। उनकी पूर्व पत्नी सुजैन खानले ऋतिको जन्मदिनको अवसरमा म्यासेज र तस्वीरहरु इन्स्टाग्राममा राखेकी छिन् । सुजैनले ऋतिको साथमा रहेको सुन्दर फो...
अनुष्का शेट्टी साउथ इन्डियन फिल्मकी सुपरस्टार हुन् । ‘बाहुबली’ र ‘बाहुबली–२’पछि अनुष्काको नयाँ फिल्म दर्शकले हेर्न पाएका छैनन् । उनी अब ‘भागमती’ फिल्मका साथ दर्शकमाझ आउँदै छिन् । उनको भागमती २६ जनवरीम...
मोडल बिनोद श्रेष्ठले गीता राई लाई मर्स्यांग्दी तार्ने तयारी गर्दै (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । पछिल्लो समयमा लोक तथा दोहोरी गित संगीतको क्षेत्रमा मौलिकता हराउंदै गैरहेको अवस्थमा हामी कलाकारहरुले आफ्नै कला संस्कृति र मौलिक परम्पराको जगेर्ना आफैले गर्नु पेछ भन्ने मूल उदेस्य बोकेर संचाल...
चम्सुरीका श्रीमान् एकाएक बेपत्ता भएपछि पत्रकार पौडेलसँग हारगुहार (भिडियोसहित)
काठमाडौ । चर्चित हांस्य कलाकार पल्पसा डंगोलका श्रीमान एक्कासी घरबाट हराएपछि उनी खोज्दा खोज्दै हैरान भएकी छिन् । भौतारिएर श्रीमान खोज्दै हिंड्दा हिंड्दै उनी पत्रकार जनार्जन पौडलकहाँ सम्म पुगेकी छिन् । ...
मेरी बास्सैकी बिम्लिले लास्टै हसाइँन । (भिडियो अन्तर्वातासहीत)
एक समय मेरी बास्सैमा बिम्लिको नामले परीचित सुशिला निरौलासँग गरिएको रमाइला ठटेउला कुराकानी भिडियो अन्तर्वाताको रुपमा । https://youtu.be/wLz07i3RDw4...
पाँच परिवर्तनसहित बहुचर्चित फिल्म ‘पद्मावत’को रिलीज मिति तय
संजय लीला भान्सालीको बहुचर्चित फिल्म पद्मावतको रिलीज मिति बल्ल तय भएको छ । विबादका कारण फिल्मको रिलिज मिति पटक पटक सर्दै आएको थियो । अव भने जनवरी २५ मा फिल्म रिलिज हुने पक्का भएको छ । मुम्बई मिररको रि...
शिवको ‘म मर्दा’ बजारमा (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा एक पछी अर्को गर्दै नव कलाकारहरुको आगमन भैरहेको छ । एक अर्का गायक शिब कास्यप को यस सांगीतिक क्षेत्रमा आगमन भएको छ । सिर्जना डिजिटल म्युजिक प्रालि मार्फत उनको ‘म...
केटाको नाम सुन्दै केटीहरुको लाइन लाग्छ के भाको यस्तो ? (भिडियो सहित)
नव गायक देवराज भट्टको फेरी अर्को पप गीत ‘चन्चले नानी’ गीत बजारमा आएको छ । युवाहरुको रोजाइमा रहेका नव गायक देवराजको एक पछि अर्को गितले बजारमा चर्चा कमाइरहेको छ । गायक स्वयंकै शब्द संगितमा रहेको गीतको ...
नायक सरोज खनाल अभिनित नेपाली कथानक चलचित्र ‘पंचायत’ अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनियामा प्रथम प्रदर्शन (प्रिमियर) गरिएको छ । शिबम अधिकारीको लेखन तथा निर्देशन रहेको उक्त चलचित्र लिएर स्वयम् कला...
‘बाहुबली’ फिल्मबाट आफ्नो दक्षिण भारतिय फिल्ममा रहेको ख्यातीलाई भारत र विश्वमा फराकिलो पारेका प्रभासले आगामी दिनमा ‘बाहुबली’ फिल्मलाई दिएजस्तो समय अन्य कुनै फिल्मका लागि दिन नसक्ने बताएका छन्। करियरमा ...
विवाहको मौसममा बलिउडमा संधै जसो खवरहरु आइरहेका छन् । अबको चर्चा भनेको सोनम कपूर र उनका प्रेमी आनंद आहूजाको बारेमा छ। हालै सोनम कपुरले यो समाचार पुष्टि गर्न मिडियालाई भनिन्, एक वेबसाइट का अनुसार, सोनम...
४७ मोडल प्रतिष्पर्धामा
काठमाडौं, ‘द सुपर मोडल नेपाल–२०१८’ बन्न ४७ जना मोडलहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्यासिफिक इभेन्ट एण्ड मेनेजमेन्टद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको दोस्रो सिजनका लागि प्रतिस्पर्धीहरु प्रशिक्षणमा वस्त छन...
एक्लै बाँच्न कति गाह्रो हुनेरहेछ ? हेर्नुहोस् (भिडियो)
रमेश हमाल ठकुरीकोको नयाँ गीत एक्लै बाच्न... बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा रामप्रसाद पौडेल र राधा हमालले स्वर दिएका छन भने निरुता शाही ठकुरी, नविन शर्मा र गणेश सापकोटाले अभिनय गरेका छन् । सूर्य क...
जनकपुरधाम । बालविवाह र दाइजोविरूद्ध सचेतना जगाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको मैथिली चलचित्र राज्जारानीको मुनाफा सामाजिक अभियानमा खर्च गरिने घोषणा गरिएको छ । चलचित्र निर्माण गर्ने पक्षद्वारा उक्त घोषणा...
रञ्जीत कसलाई भन्दैछन् ‘आउन मायाँ आउ’ (भिडियो सहित)
काठमाडौं । लोकप्रिय गायक रञ्जीत लामाको ‘आउन माया आउ’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो यसै साता सार्वजनिक भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखी संगीत क्षेत्रमा सक्रिय गायक लामाले देश तथा विदेशमा हुने सांगीतिक कार्यक्र...
रानी मुखर्जी आफ्नो फिल्म हिच्कीबाट तीन वर्ष पछि फिल्म इन्ड्रस्टीजमा आएकी छिन् । यो समय उनी आफ्नो फिल्म हिचकीको प्रमोशनमा जुटेकी छिन् । रानीले भनिन्, उनले आदित्य चोपडासंग विबाह किन गरिन् । रानी मुखर्ज...
सुमन र अपेक्षाको मायाँ यसरी झांगिएपछि (भिडियो सहित)
विराटनगर । चर्चित मोडल अपेक्षाबस्याल र गायक एवम मोडल सुमन परियारको मायाँजालमा परेका छन । उनीहरुको मायाँजाल यतिसम्म गहिरिएको छ कि एक अर्काविना बाँच्नै नसक्ने भएका छन । मायाँको कहानी अधुरो नछाडी कहानी ...